Japàna: Afaka Isorohana Famonoantena Ve ny Twitter? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Mey 2017 8:05 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 繁體中文, 简体中文, русский, bahasa Indonesia, English
Jior LED manga ao amin'ny Làlana Shinjuku .(Tokyo) An'i jediduke
Vao haingana ny Masoivohon'ny Polisim-Pirenena no namoaka ny vokatry ny fanarahana maso fanaony isantaona momba ny famonoantena ao Japàna. Araka ny antontanisa ofisialy [ja, pdf], 32.845 ireo olona nanatanteraka famonoantena tamin'ny taona 2009 ary ny tena nampivarahontsana dia ny fitomboan'ny isan'ireo teo anelanelan'ny 20 sy 30 taona; ny tena antony [ja] dia voalaza ho 1) olana ara-pahasalamana, 2) olana ara-bola na ara-tsosialy, 3) olana ara-pianakaviana.
Malaza ratsy loatra ho iray amin'ireo firenena mandroso nefa manana taham-pamonoantena avo indrindra isaky ny isan'ny mponina [en], efa an-taona maro i Japàna no efa niezaka ny hiatrika ilay olana, tamin'ny fiasàna hisorohana izany miainga avy amin'ny lafim-piarahamonina rehetra. Tsy sasatra ny manao fanentanana mba hanairana ny saina sy manasa ny vahoaka hila fanampiana amin'ireo ivontoerana natao ho amin'izany ny governemanta sy ireo vondrona hafa, rehefa mahatsapa izy ireo fa tratry ny rarintsaina na resy lahatra fa ny vahaolana tokana hamahàny ny olany, na matetika ny olan'ireo havan-tian-dry zareo, dia ny famonoana tena.
Ny fanapahana hevitra hiresaka amin'olona hafa, fieritreretana ary famaritana ny anton'ny hadisoam-panantenan'izy ireny, dia tena dingana sarotra tokoa izay vitsy ny olona tratry ny rarintsaina no inoana fa hahavitra hanao azy. Nefa, na tsy ho vahaolana maharitra aza ny aterineto, mino ny sasany fa mety ho fitaovana afaka manampy , indrindra fa eny anivon'ireo andian-taranaka tanora mpiondana teknolojia.
Amin'io lafiny io, ivon'ny adihevitra natao tsy ela akory izay ny Twitter, ho an'ireo izay mahita ny endrika tarehintsoratra 140 ao aminy ho misy azo ampiasaina hifandraisana amin'ireo mitady fanampiana nefa maniry tsy ho fantatra anarana ary tsy afaka ny hilaza ny fangirifiriany aminà fehezanteny lavabe sy tsara rafitra.
Yamabe milaza fa ny vaovao [en] hoe, tsy ela akory izay, afaka nisakana vehivavy iray tsy hamono tena ilay mpilalao an-tsehatra, Demi Moore, tamin'ny alàlan'ny fifampibitsihana tarehintsoratra manana halava 16 monja, dia nahatonga azy hisaintsaina momba ilay olana.
Nosaintsainiko kely ny momba azy io ary tsapako fa raha ny marina dia afaka miaraka tsara ny Twitter sy ny fisorohana ny famonoantena.
Voalohany indrindra; tsy manara-penitra ny fifandraisana misy ao amin'ny Twitter, izay mahatonga ny fanoratana ho mora kokoa. Rehefa voalohany mipoitra ny fahatsapàna hoe nandiso fanantenana ny fiainana, na nankarary saina ka tsy ilaina tohizana lavitra ary tonga hatramin'ny faniriana hampitsahatra azy mihitsy, dia eo ilay teboka iray afaka andefasaka ilay fihetsehampo amin'ny alàlan'ny bitsika – fahatsapana fa tsy afaka manohy izany intsony ny olona iray ary tsaratsara ho azy angamba raha foana tsy hita eto amin'ity izao tontolo izao ity izy.
Araka izany, dia mety ho azo ampiasaina ny Twitter, tsy hoe fotsiny ho fisorohana ny tranganà famonoantena, fa koa hanakanana ny fahaterahan'izay dingana teo alohany, ny fieritreretana faniriana ny ho faty. Ho an'ireo famonoantena vokatry ny hadisoam-panantenana tanteraka, angamba mety hanampy hahatsapàny fa tsy irery izy raha toa ny olona iray afaka mibitsika ny fahaketrahany….
Fitaratra fisorohana ny famonoantena, ao Sapporo. an'i MJTR (´･ω･)
Marobe ireo niezaka ny nanome ny fijeriny [en] ny olana sarobahàna tahaka izany, niezaka ny nandalina ny dona ara-tsaina izay entin'ny “fihetsika famonoantena” ao Japàna, toerana izay niheverana fa fihetsika fanehoana fahasahiana ny “famonoantena” tamin'ny andro fahiny. Tsy ao anatin'ny kolontsaina Samurai ihany, fa koa any ambanivohitra any, izay mazàna ireo zokiolona no manapaka hevitra samirery ny ‘hihataka’ any an-tenodrombohitra [en] mba tsy ho vesatra ho an'ny fianakavian'izy ireo.
Nefa ny zavamisy hoe toa tsy hihena mihitsy ny isan'ireo tratrany, dia efa midika fotsiny fa saro-pantarina ny antony, ary ny bilaogera sasany, toa an'i Ayasan, dia kely finoana ihany amin'ny ho tanjaky ny Twitter sy ny aterineto amin'ny ankapobeny.
Misy fomba betsaka azon'ny tsirairay ifampiresahana, toy ny fampiasàna ny Twitter na ireo efitra fifampiresahana (chat), toerana izay tsy ahafantaranao hoe iza ilay iray hafa, sy tsy ahafantaran-dry zareo koa hoe iza ianao. Mazava loatra, mety ho azo atao ara-teknika ny mamantatra ny olona iray ao ambadiky ny solosaina, saingy tsy eo noho eo, mbola tsy afaka atao aloha izany hatreto. Izany no antony, rehefa anaty tranga tahaka itony, iheverako fa tena mampididoza raha afaka tantanina amin'ny alàlan'ny fitaovana iray mamela fifanakalozana malalaka tahaka izany ny fiainan'ny olona iray . […]
Tany aloha tany aho dia nanoratra lahatsoratra hoe ‘manana hery mahafaty olona ny teny’. Ny fisafidianana ny teny, ny fampiasàna ireo voanteny, ary ny fahasamihafàn'ny fehezanteny iray feno manontolo dia tena manandanja be tokoa. Ilay olona misavily eo amin'ny kofehy kely iray manify manasaraka ny tsipiky ny fiainana sy ilay lafy iray ‘hafa’ dia tena saropady tokoa ary mora tohinin'ny fehezanteny tsirairay, mahatonga ny fanapahankevitra hoe “lasa izao / tsy lasa izao” ho haingana dia haingana. Misy ve olona afaka hiteny amin'ny fomba azo antoka fa ilay olona, ifampiresahany amin'ny alàlan'ny solosaina, dia tena manana fitondrantena atosiky ny fitiavana tokoa?
Tena te-hanolotra fiarahabana aho ho an'ireo izay tena mino marina tokoa fa miaraka amin'ireo karazana fifandrohizana natsangany tao amin'ny aterineto, ny fihetsehampon'ny olona iray izay tena mihevitra ny hoe “mahatsiaro tena manirery aho ka te-ho faty” dia afaka tokoa ho avilivily ny sainy. Na angamba tsy ampy fieritreretana ry zareo.
Eny, ny fifandraisana amin'ny olona iray tsy fantatra amin'ny alàlan'ny aterineto dia mety hanome famonjena vonjimaika saingy tsy heveriko ho afaka hanome hevitra na vahaoloana iray maharitra.
Raha tsy nahavita nisoroka ny famonoantena ireo fepetra fisorohana, tahaka ireo fefy sy jiro LED manga any amin'ireo toeram-piantsonan'ny fiarandalamby (ny fitsambikinana amin'ny fiarandalamby no fomba ankafizin'ny maro ‘hamaranana ny aminy’), ny sasany indray mihevitra hoe , ao anatin'ny vanimpotoanan'ny bilaogy, Twitter sy Facebook, mety ho fomba vaovao afaka hanampy hamaha ilay olana ireo tolotra omen'ny tambajotra sosialy.
Ikeda Hayato mino ny herin'ny haino aman-jery sosialy.
Miaraka amin'ilay endrika tranainin'ny tranonkala, mety tsy nisy mpihaino ny feon'ireo mijaly, saingy miaraka amin'ny tranonkala amin'izao fotoana izao, izay tsara rafitra sy azo rasina ireo kisarisary sosialy (fifandraisan'ny samy olona, fifandrohindrohizan'ny angondrakitra), ny fanandratanao ny feonao dia afaka ho lasa fifandraisana aminà olona iray.
Ing. Suzuki avy ao amin'ny Wonder Shake (@Doubles9124), nandefa tamiko ireto teny ireto tamin'ny alàlan'ny Skype:” Ny haino aman-jery sosialy dia mahasolo toerana iray izay ahafahana mandray fanapahankevitra iray manome làlana hisian'ny fiovàna amin'ny fiainan'ny olona iray”. Raha azo atao ny misoroka ny famonoantena, dia mety ho angamba ny fampiasàna araka izay tratra ny dingana iray fandraisana fanapahankevitra mba hanovàna ny fiainan'ny olona iray.
Ny tena hitako ho manaitra dia ny fitomboan'ny isan'ireo olona mamono tena eo anelanelan'ny 20 sy 30 taona. Mazava loatra fa tsy ho vita ny hamaha ny olan'ny tsirairay amin'ny fampiasana ny teknolojia, saingy ny tranonkala amin'izao fotoana izao dia manana hery hampifandray, ary mety ho zavatra mahafinaritra raha toa, amin'ny fampiasana ny tranonkala sosialy, afaka ho voaova sy ho voavonjy ny fiainan'ny olona, na dia ho iray monja aza.